Malunga nathi - iYantai Stamina Mining Equipment Co., Ltd
I-H1000 yebhasikiti yekhulu
VM1100 ibhasikiti yekhulu
FC1200 ibhasikidi yekhulu
HFC1300 icentrifuge basket
VM1300 icentrifuge basket
VM1400 ibhasikiti yekhulu
VM1500 ibhasikiti yekhulu
VM1650 ibhasikidi yekhulu
Izinto eziShukumayo zeScreen
Izixhobo zeScreen ezingama-240/610
Izixhobo zeScreen ezingama-300/610
Izixhobo zeScreen seVibheli ye360 / 610
420/610 Izixhobo zentshukumo ye Screen
Icandelo lokuhlela izixhobo
Icandelo lokwahlulahlula iMagnetic
Indibano yokuhlela izixhobo
Icandelo lokwahlula Magnetic
Isilinda esongwe ngentsimbi
Indibano Igubu leMagnetic
Indawo yeweld weld
Belt Pulley (Igubu)
Yantai Stamina Mining Equipment Co., Ltd eyasekwa ngonyaka ka-2009, ibekwe e Yantai, Shandong, i window evulekileyo port isixeko e China.
IYantai sisixeko esihle nesidumileyo saselwandle, apha sinezinto zokuhambisa, ukugcwala kwezithuthi, izibuko laseYantai kunye nezibuko laseQingdao zilungele ukuthunyelwa kuwo wonke umhlaba. Sikwindawo yorhwebo yasimahla (i-FTA), urhulumente unika umgaqo-nkqubo okhethekileyo wokukhuthaza ukuthunyelwa kwelinye ilizwe.
Sijolise kuyilo lwezixhobo zokuhlola ezemigodini kunye nemveliso, ubuchwephesha kwi-welding nasekuqhubeni ngomatshini ngokubhekisele kwizixhobo zemigodi. Siye saqokelela amava amaninzi kwiindawo zokumbiwa kwempahla kwindawo yokuhlamba amalahle kunye nezixhobo zokulungiselela.
Ukuthunyelwa kwebhasikiti yethu yamacentrifuge phesheya kwimimandla nakwamanye amazwe, ngexabiso eliphantsi kunye nomgangatho onokuthenjwa. Amacwecwe ethu okucoca ngokuchanekileyo kunye neebhasikithi ze-centrifuge zenziwe nge-304/316 SS ucingo lwe-wedge, ngokusebenza ngokugqibeleleyo kukumelana nokubola, ukumelana ne-abrasion, ukusebenza ngokuhlamba amalahle kunye nobomi bexesha.
Igubu leMagnetic kunye ne-VIBRATING BANANA SCREEN nazo ziyimveliso zethu eziqhelekileyo, zonke zinokwenziwa ngokwezifiso.
Sifumene iingcali ze-welding eziqhelekileyo kunye nomgangatho we-welding standard (i-DIN standard, i-AS standard / i-JIS standard / i-ISO standard ...), kunye neendlela zokufumanisa i-weld flaw.
Sinezo zonke iintlobo izixhobo machining ezifana umatshini lathe enkulu, auto ukubhola umatshini, umshini wokugaya, umatshini wokulinganisa njalo njalo, kunye nokusebenza eliphezulu ngqo.
Iqela lezobuchwephesha lilungu lethu, iinjineli zethu zinamava, kwinqanaba eliphezulu loyilo kwaye zinako ukusombulula iingxaki.
Emva kweminyaka engaphezu kwe-10 yophuhliso oluqhubekayo kunye nokuyila, iStamina iseke ubuhlakani obuzinzileyo neenkampani ezininzi zamanye amazwe eJamani, eOstreliya, eUSA, Mongolia njalo njalo. Iimveliso zethu zikhululiwe kuvavanyo kuninzi lwabathengi.Nezingcali zethu ezinamava, inkqubo yolawulo lomgangatho wobungcali, izixhobo zovavanyo olupheleleyo, izixhobo zokwenza ulungelelwaniso oluphambili kunye nenkqubo yenkonzo emva kokuthengisa, siyaqinisekisa ukuba abathengi bethu banokufumana ezona mveliso zilungileyo kunye nenkonzo Ukomelela.
Yantai amandla Mining Equipment Co., Ltd.